Mattel Anotangisa Barbie Nekubatsira Kunzwa - Gamepoint - Bhodhi & Vhidhiyo Mitambo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | May 12, 2022 | Geek zvinhu, Geek zvinhu, nhau
Nyika yakasiyana - uye ndizvo zvakaitawo zvidhori zveBarbie. Mutsetse weBarbie Fashionistas unopemberera kusiyana-siyana uye unokurudzira nyaya dzinonakidza naBarbie naKen. Iye zvino Barbie anosuma nhengo itsva dzemhuri yeFashionistas dzine mavara, kusanganisira kekutanga Barbie ane chiyamuro chekunzwa kuseri kwenzeve (BTE), Ken ane Vitiligo uye chidhori chine gumbo reprosthetic.
Zvidhori zveBarbie Fashionistas zvinouya mumhando dzakasiyana-siyana dzeganda, mavara eziso, mavara ebvudzi uye maumbirwo, mhando dzemuviri uye zvitaera. Izvi zvakasiyana-siyana zvinopihwa zvakagadzirirwa kubatsira vana kuwana chidhori chavanoziva nacho. Kubva 2015, Barbie akaunza zvinodarika zana nemakumi manomwe neshanu zvitarisiko zvakasiyana, kusanganisira zvidhori zvine hurema hwemuviri, seBarbie ari muwiricheya.
Mattel: Muna 2021, masere pagumi ane mukurumbira zvidhori achave akasiyana
Zvidhori zvinomiririra mamwe ganda reganda, mavara ebvudzi uye maumbirwo, uye yakakura kusiyana kwemuviri - semuenzaniso, kureba, diki, curvaceous, chiuno chisina kutaurwa, kana mamwe anotsanangurwa maoko. Ken inowanikwawo muzviyero zvakasiyana zvemuviri uye nemavara emeso akasiyana uye mabvudzi ebvudzi. Muna 2021, masere kubva pagumi ane mukurumbira zvidhori pasirese aive akasiyana.
Barbie ane chiyamuro chekunzwa kuseri kwenzeve (BTE):
Ichi ndicho chidhori chekutanga chaBarbie kuiswa nechekuseri-kwe-nzeve chinoyamura kunzwa, kuwedzera mutsara weFashionistas kuti ubatanidze vanhu vakaremara, vakaita sevakaremara. B. kurasikirwa kwekunzwa, kunofanirwa kufungwa.
Pamusoro pezvo, mutambo wegore rino weFashionistas unosanganisira zvidhori zvitsva zvine mhando dzemuviri dzakasiyana uye chidhori chine gumbo reprothetic.
Ken ane Vitiligo:
Muna 2020, takawedzera chidhori chevitiligo kumutsetse wedu weFashionistas kukurudzira vana kuti vagadzire dzimwe nyaya dzezvavanoona munyika yakavatenderedza. Aive mumwe wevashanu vepamusoro vakatengesa fashionistas muAmerica gore iroro. Iye zvino Barbie anowana shamwari ine vitiligo muKen.
Pamusoro pezvo, misiyano mitsva yeKen ine muviri mutete uye maumbirwo matsva ebvudzi anounzwa.
dr Jen Richardson, nyanzvi inotungamira muchikamu chedzidzo yekunzwa, anowedzera kuti, “Ndinokudzwa kushanda naBarbie kugadzira mufananidzo chaiwo wechidhori chakapfeka chinoyamura kunzwa kuseri kwenzeve. Semunhu anodzidzisa manzwi ane makore anopfuura gumi nemasere eruzivo achikurudzira kurasikirwa nekunzwa, zvinondikurudzira zvikuru kuti kune chidhori chiri kutonga hupenyu hwake nekutadza kunzwa. Ndinofara kuti varwere vangu vaduku vanogona kuona uye kutamba nechidhori chakafanana navo.”
"Nezvitarisiko zvinopfuura 175 zvakasiyana, mutsetse weBarbie Fashionistas parizvino ndiwo mutsara wakasiyana-siyana wezvidhori pasi rose. Tinodada zvikuru kubatsira vana kuwana mhando dzakasiyana dzerunako uye fashoni - zvinoratidzwa muzvidhori zvinongofanana nazvo. Asi chii chinonyanya kukosha: muzvidhori zvinotaridzika zvakasiyana zvachose kubva kwavari, "anodaro Anne Polsak, Mukuru weCorporate Communications Mattel Germany.
Barbie GRB94 - Chidhori cheFashionistas chine wiricheya uye chakakanganisika... * 21,03 EUR tenga
Kare Stellaris: Kuburitswa kweiyo Overlord kuwedzera
Inotevera Transport Fever 2 inowana gadziridzo nekuvandudzwa
Zvigadzirwa zvitsva zve2021: Amigo Spiele anounza Lama Dice pamusika
Diablo 4: Nhau nezvekutaura nyaya, nyika yemutambo uye maitiro evazhinji
Muedzo weMotal Shell yePS4: Mweya-Senge iyo haisi yakaderera kune iyo hombe yemuenzaniso.
Pegasus Mitambo inoda kuwedzera peni nepepa nzvimbo